Asomafo 28:1-16 NA-TWI | Biblica
Asomafo 28:1-16 NA-TWI
Yeduu mpoano hɔ no, ankyɛ na yehui sɛ yɛwɔ supɔw Malta so. Supɔw no sofo no gyee yɛn fɛw so. Esiane sɛ na osu atɔ ama awɔw aba nti, wɔsɔɔ gya ma yɛtoe.
Paulo bubuu mmabaa sɛ ɔde regu ogya no mu. Ɔde regu mu no, ahurutoa bi a ogya no hyew aka no no, bobaree ne nsa ho. Supɔw no sofo no huu ɔwɔ no sɛ ɔbobare ne nsa ho no, wɔkae se, “Saa onipa yi yɛ owudifo a wanya ne ti adidi mu wɔ po akwanhyia mu nanso ɛnam ne bɔne nti, owu ara na etwa sɛ owu.”
Paulo petee ɔwɔ no too ogya no mu a wantumi anka no. Na nkurɔfo no nyinaa ani da so sɛ Paulo bɛhonhon anaasɛ obetwa ahwe awu. Nanso wɔtwɛnee ara a biribiara anyɛ no no, wɔsakraa wɔn adwene kae se, “Ɔyɛ onyame bi.”
Na ɔpanyin a ɔhwɛ supɔw no so a wɔfrɛ no Publio no fi bɛn mpoano hɔ; ogyee yɛn fɛw so, som yɛn hɔho nnansa. Saa bere no ara na Publio n’agya yaree atridii ne konkoruwa a aka no ato hɔ. Paulo kɔɔ ɔdan a na ɔda mu no mu de ne nsa guu no so, bɔɔ mpae maa ne ho yɛɛ no den. Nea Paulo yɛe no maa ayarefo a wɔwɔ supɔw no so no nyinaa baa ne nkyɛn ma ɔsaa wɔn yare. Wɔmaa yɛn akyɛde bebree. Yɛrebefi hɔ akɔ no nso, wɔde biribiara a ɛho hia yɛn no beguu hyɛn no mu maa yɛn.
Yedii abosom abiɛsa wɔ supɔw no so ansa na yenyaa hyɛn bi a efi Aleksandria a ne nsɛnkyerɛnne yɛ ti abien a egyina hɔ ma anyame baanu bi. Na saa hyɛn no abedi awɔw bere no wɔ supɔw no so. Yeduu Sirakusa no, yedii nnansa wɔ hɔ. Yefi hɔ no, yɛtoaa so koduu Regio. Ade kyee no, mframa bi bɔ fi anafo fam ma nnanu akyi no, yekoduu Puteoli. Ɛha na yehyiaa gyidifo bi a wɔsrɛɛ yɛn sɛ, yɛntena wɔn nkyɛn nnawɔtwe. Ɛno akyi no, yɛtoaa so koduu Roma.
Anuanom a wɔwɔ Roma no tee yɛn nka sɛ yɛreba no, ebinom behyiaa yɛn kwan wɔ aguabɔe a ɛwɔ Apia kwan no so na afoforo nso hyiaa yɛn wɔ ahɔhobea bi a wɔfrɛ no Ahɔhodan Abiɛsa no. Bere a Paulo huu wɔn no, ne ho sanee no na ɔdaa Onyankopɔn ase.
Yeduu Roma no, wɔmaa Paulo ho kwan sɛ ɔnkɔtena baabiara a ɔpɛ na ɔsraani bi nnwɛn no.
Read More of Asomafo 28